काठमाडौंको एउटा घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा ? शिशिर भण्डारी छुट्टाउन जाँदा यस्तो भयो [भिडियो हेर्नुस] – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौंको एउटा घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा ? शिशिर भण्डारी छुट्टाउन जाँदा यस्तो भयो [भिडियो हेर्नुस]
काठमाडौं । काठमाडौंको बाँसबारीमा किरण राईको एउटा सानो कोठा छ, जहां उनी आफ्नो ठुलो मेहेनतले आकर्षक तस्विरहरु बनाईरहेका भेटिन्छन् । भोजपुर जिल्लामा जन्मिएका किरण राई सामान्य तस्विर हैन बालुवाले तस्विर बनाउंछन् । किरण राईले बालुवाको प्रयोगबाट मदकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, रबि लामिछाने, राजेश हमाल, धुर्मुस सुन्तली लगायत थुप्रै नेपालका हस्तीहरुको तस्विर बनाईसके । संजोगको कुरा हामी राईको कोठामा पुग्दा उनी मेरै तस्विरलाई फ्रेम गर्दै थिए । एकैछिनको मेहेनतपछि उनले तस्विरलाई फ्रेममा सजाए अनि यो सुन्दर उपहार मलाई दिए ।
दर्शकबृन्द, किरण राईले सिन्का सिन्का जोडेर तस्विर बनाउन पनि थालिसकेका छन् । देख्दै आकर्षक उनले सिन्काबाट बनाएको पहिलो तस्विर लोभलाग्दो छ । अब अरु थुप्रै तस्विरहरु उनी सिन्काको प्रयोगबाट बनाउने सोचमा छन् । खेल जीवनमा जीवनका धेरै बर्ष बिताएका किरण राईले यसैबिच महिला दिदी बहिनीहरुका लागि निकै उपयोगी सेल्फ डिफेन्सको भिडियो लिएर आएका छन् । शिशिर भण्डारीसँगको उक्त भिडियो सबैले हेर्नुहोला । काठमाडौंको एउटा घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा ? शिशिर भण्डारी छुट्टाउन जाँदा यस्तो भयो ! भिडियो हेर्नुस…
लोकप्रिय सर्जक क्रिस क्षेत्रीको नयाँ गीत भाइरल सार्वजनिक, [भिडियो हेर्नुस्]
भूमिहीनलाई दशैँसम्म लालपुर्जा दिइने